Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo si kumeelgaar ah ula wareegay awooda Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweyne ku xigeenka Puntland oo si kumeelgaar ah ula wareegay awooda Puntland
April 21, 2022 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan. [Isha Sawirka: Facebook]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan ayaa si kumeelgaar ah ula wareegay awooda Puntland kadib markii madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni uusan xilligan gudan karin wajibaadkiisa dastuuriga ah maadaaba uu ku mashquulsanyahay ololihiisa madaxtinimada Soomaaliya, sida uu ku sheegay bayaan uu soo dhigay boggiisa rasmiga ah ee Facebook.
“Mar haddii Madaxweynuhu uusan si ku meel-gaar ah u gudan karin waajibaadkiisa Dastuuriga ah sida ku cad qodobka 81-aad ee Dastuurka Puntland, farqadiisa 1-aad dhammaan masuuliyadaha iyo waajibaadkii dastuuriga ahaa waxay si ku meel gaar ah ugu wareegayaan una gudanaaya anigoo ah Madaxweyne Kuxigeenka Dawladda Puntland si waafaqsan Dastuurka, Shuruucda iyo Qawaaniinta kale ee u degsan Puntland.” Ayuu ku yiri qoraalkiisa.
Tilaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo asbuucan uu Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni uu Muqdisho u tagay sidii uu halkaas uga bilaabi lahaa ololihiisa madaxweynaha Soomaaliya oo uu u sharaxanyahay.
Deni oo gaaray Muqdisho si uu halkaas uga bilaabo ololihiisa madaxtinimada Soomaaliya
RW Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo ku dhawaaqay inuu u sharaxanyahay madaxweynaha Soomaaliya
Muqdisho-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha dowlada federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo shir saxaafadeed ku qabtay maanta oo Isniin ah magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu u sharaxanyahay madaxweynaha Soomaaliya. “Waxaan go’aansaday in aan isku sharaxao madaxweynaha [...]